आजको राशिफल – वि.सं. २०७३ साल पुस २८ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१७ जनवरी १२ तारिख। « Npnews
आजको राशिफल – वि.सं. २०७३ साल पुस २८ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१७ जनवरी १२ तारिख।
जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि तत्काल फाइदा उठाउन नसकिएला। अवसरका लागि जोखिमपूर्ण काममा जुट्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ला। तापनि मेहनतले विशेष अवसर दिलाउनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। व्यवसायमा पनि राम्रै धन आर्जन हुनेछ। अग्रजहरूको मार्गदर्शन लाभदायक रहनेछ।
बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक अभिव्यक्तिले ठूलो अवसर दिलाउन सक्छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
हिम्मतले काम लिँदा चिताएको सफलता प्राप्त हुनेछ। प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धिले हौसला जगाउनेछ। इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै नयाँ कामको योजना अघि बढ्नेछ। परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिएला। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
समयको तालमेल नमिल्दा काममा पछि परिनेछ। हल्लाको पछि लाग्दा दु:ख पाइनेछ भने मेहनत गर्दा बिस्तारै प्रगति हुनेछ। व्यापारमा लाग्नेहरूलाई सामान्य फाइदा हुनेछ। रुचिका विषयमा लगानी बढाउने समय छ। कमजोरी बाहिर आउनाले नोकरी तथा राजनीतिमा मा समस्या पर्न सक्छ। तापनि भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ।
धेरैले मेहनतको तारिफ गर्नेछन्। शुभचिन्तकहरू प्रशस्तै फेला पर्नेछन्। चुनौतीहरू स्वत: हट्नेछन् भने कर्मयोग र आम्दानीले पछ्याउनेछन्। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। सामान्य मित्रता दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्छ। कामले अरूको मन लोभ्याउँदै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। नसोचेको प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ।
मनको डरले सताए पनि व्यवहारमा फाइदा हुनेछ। विवादमा अघि नबढ्नुहोला। बुद्धिको उपयोग गर्दा जटिल काम पनि सम्पादन हुनेछ। मेहनतीहरूका लागि समय फलदायी रहनेछ। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा ध्यान पुर्याउनुहोला। आजको कामबाट पछिसम्म फाइदा पुग्न सक्छ। विगतको श्रमबाट मनग्य लाभ हुनेछ। अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला।
दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। आतिथ्यपूर्ण सम्मानका साथ मित्रताको बन्धन कसिलो हुने समय छ। व्यवसायका लागि यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। सोख पूरा हुनुका साथै प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। नयाँ ज्ञानले अध्ययनमा उत्साह जगाउनेछ। सुमधुर प्रेम वा दाम्पत्यले प्रफुल्लित भइनेछ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ भने विभिन्न भौतिक साधन प्राप्तिको योग छ।
आँटेका काममा बाधा पुर्याउनेहरू प्रशस्तै हुनेछन्। अप्ठ्यारा परिस्थिति आए पनि बुद्धिको उपयोगले प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। प्रयत्न गर्दा प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् भने ईर्ष्या गर्नेहरूलाई मेहनतको पाठ सिकाउन सकिनेछ। स्रोतसाधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ होला। आलस्य गर्ने बानीले पछि परिनेछ भने मेहनत गर्दा बिस्तारै फाइदा हुनेछ।
अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। सहपाठीहरू पछि पर्नेछन्। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। प्रयत्न गरेका काम सजिलै सम्पादन हुनेछन्। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ मिल्नेछ। सन्तान वा अनुयायीका माध्यमबाट चिताएको काम बन्नेछ।
रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ तथा आफन्त नजिकिन सक्छन्। भूमि तथा पशुधनबाट पनि फाइदा हुनेछ। बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ। महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राख्नुहोला। स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय छ। परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बन्न सक्छ।